Ary farany, Apple TV miaraka amin'ny tvOS 11.3 dia hamela ny filalaovana ny atiny Dolby Vision amin'ny Sony TV amin'ny 2017 | Avy amin'ny mac aho
Ary farany, Apple TV miaraka amin'ny tvOS 11.3 dia hamela ny filalaovana ny atiny Dolby Vision amin'ny Sony TVs manomboka amin'ny 2017
Tamin'ny herinandro lasa teo aho dia niresaka tamin'ny lahatsoratra iray momba ireo olana niseho tamin'ny marika samihafa amin'ny fahita lavitra tamin'ny Dolby Vision sy Apple TV 4K. Ny orinasa tokana nahavita tsara ny asany ary manavao ny fahitalavitra 2017 farany hahafahan'izy ireo mampiasa ny Dolby Vision dia ny Sony, fanavaozana izay efa tonga tany Etazonia sy Kanada ary ho tonga any Eropa amin'ny volana feb.
Ankehitriny, tsy mifarana eto ny tantara ary na dia teo aza ny famoahan'ny Sony ny fanavaozana ho an'ny fahitalavitra, dia hita fa afaka nilalao ny atiny Dolby Vision tamin'ny amin'ny alàlan'ny streaming miaraka amin'ireo rindranasan'ny rafitra manokana (TV Android). Amin'ny mpilalao rehetra ampifandraisin'ny HDMI, toy ny Apple TV 4K, dia mbola tsy azo natao ny nankafy ireo tombony atolotry ity rafitra ity.
Vao tsy ela akory izay no nanavao ny fahitalavitra rehetra an'ny Sony i Sony vao afaka nilalao atiny ambanin'ny fenitra Dolby Vision. Na izany aza, ity fenitra ity dia navoaka tao amin'ireo fahitalavitra nampiasa ny mombamomba ny Dolby Vision izay nanery ny mpilalao handray ny asa rehetra, Raha tokony handefa ny metadata rehetra amin'ny fahitalavitra fotsiny mba handehanany.
Noho io antony io dia maro ireo mpampiasa nitaraina ary tsy maintsy nivoaka i Sony naneho hevitra fa, azo atao ny mamoaka avy amin'ny mpilalao HDMI raha toa ireo mpilalao ireo, anisan'izany ny Apple TV 4K havaozina ihany koa amin'ity mombamomba an'i Dolby Vision vaovao ity. Amin'izany fomba izany, ny an'ny Sony dia nandefa ny ovy mafana tamin'i Apple, izay tsy niadana ny fihetsiny ary ny ho avy TVOS 11.3 dia efa nomanina miaraka amin'ilay mombamomba vaovao ilaina ho an'ny tompon'ny fahitalavitra farany an'i Sony.
Raha Sony XE93, XE94, A1 OLED na ZD9 anao ny fahitalavitrao dia afaka miaina am-pilaminana ianao ary vetivety dia afaka milalao ny atiny Dolby Vision miaraka amin'ny Apple TV 4K ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Ary farany, Apple TV miaraka amin'ny tvOS 11.3 dia hamela ny filalaovana ny atiny Dolby Vision amin'ny Sony TVs manomboka amin'ny 2017
Amin'ny taona 2018 dia afaka manana OmniFocus amin'ny kinova tranonkala izahay